अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोली नेपालमा, बैंकका अधिकारीहरुसँग भेटघाट तिब्र — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोली नेपालमा, बैंकका अधिकारीहरुसँग भेटघाट तिब्र
काठमाण्डौं । नेपालको अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को टोली नेपाल आएको छ। टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग भेटघाट तिब्र पारेको छ। जेरार्ड जे. अलमेकिन्डर्सको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली ‘आर्टिकल-IV’ मिसनका लागि नेपाल आएको हो। उनीहरु १३ दिनसम्म नेपालमा रहने छन्।
आइएमएफले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुमा हरेक बर्ष त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर उपयुक्त राय बनाउन टोली पठाउने गरेको छ। उनीहरुले आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर राय बनाएपछि ‘आर्टिकल-IV’ मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छन्।
‘आर्टिकल-IV’ मिसनमार्फत आएको टोलीले नेपालको म्याक्रो फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट र आर्थिक अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्छ। उनीहरुले नेपालको विनिमय दर प्रणाली र विनिमय अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गर्छन्।
नेपालमा आर्थिक कृयाकलाप कस्तो भइरहेको छरु बस्तुस्थित के छ ? वर्तमान अवस्था कस्ता छन्रु आफूले बेलावखत दिएको प्राविधिक सुझाव तथा सहयोगको कार्यान्वयन अवस्था के छरु टोलीले अध्ययन गर्छ । उनीहरुले आवश्यक अध्ययन गरेपछि रिपोर्ट तयार गर्छन्। रिपोर्टमाथि आइएमएफको २४ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा छलफल हुन्छ।
टोलीले नेपालमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय आयोग, निजी क्षेत्रको छाता संगठन, बैंकर्स संघका सदस्यहरुसँग पनि छलफल गर्छ। यसबाहेक राजनीतिक दलका आर्थिक हेर्ने नेता तथा सल्लाहकार, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, दातृ निकायका प्रतिनिधि, दूतावासहरुसँग पनि छलफल गर्छ। त्यसका आधारमा टोलीले आफ्नो राय बनाउँछ।
आवश्यक अध्ययनपछि उसले नेपालमा कस्तो सहयोग आवश्यक छ वा पुरानो सहयोगको अवस्था के छ भनेर सुझाव तथा सहयोग गर्छ। टोली नेपालबाट फर्किनुअघि नेपाल हेर्ने आइएमएफका कार्यकारी निर्देशक मर्जुनिसम ओमर पनि आउने छन्।
२९ पुस २०७३, ११।००
२०७३ पौष २९ गते १३:०५ मा प्रकाशित
उपत्यकामा थपिदै सयवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेट्रो बस, ६८ करोड बजेट विनियोजन
प्रचण्ड भारतीय विशेषदूतसँग वार्ता गर्न अस्ट्रेलिया जाँदै
राष्ट्र बैंकले आज दुई अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
साताको अन्तिम दिन सेयर बजारमा सामान्य वृद्धि
अब निर्णय कागजमा लेखिन्न, प्रधानमन्त्री कार्यालय भयो स्मार्ट (फोटो फिचर)